Zanu PF member: VP Chiwenga should have led post-coup government - Mbare Times
Home Politics Zanu PF member: VP Chiwenga should have led post-coup government
Zanu PF member: VP Chiwenga should have led post-coup government
Zanu PF member: VP Chiwenga should have led post-coup government. Former ZANU PF Mashonaland Central official Goodman Tamuona Musariri said that he is going challenge President Emmerson Mnangagwa’s legitimacy in the courts of law.
I find Mnangagwa’s ascendancy through the unsanctioned Zanu PF central committee caucus of November 19 2017 unlawful, null and void. Chiwenga like any VP in Zanu PF is not an elected member of congress, but an appointee of the President to serve at Mnangagwa’s pleasure and mercy.
In other news – Telecoms mogul Strive Masiyiwa in Bloomberg’s top 50 prominent figures of 2020
Telecoms mogul Strive Masiyiwa in Bloomberg’s top 50. The annual Bloomberg 50 recognises people who are doing notable things and the 2020 list is made up of individuals who set the bar high in business, entertainment, finance, politics, and science and technology whose accomplishments merit acknowledgement.
Zimbabwean businessman and philanthropist, Mr Strive Masiyiwa, has been named by Bloomberg among the top 50…Learn More.
Previous articleWedding bells as Mampintsha sends uncles to Babes Wodumo’s family for lobola negotiations
Next articlePresident Mnangagwa sees off South Africa’s ambassador to Zimbabwe